YouTube लाई मार्केटिङ प्लेटफर्मको रूपमा प्रयोग गर्ने चतुर तरिकाहरू - YTpals
भिडियो सामग्रीको संलग्नता र रूपान्तरण शक्तिको लाभ उठाएर, तपाईंले YouTube मा अपार ब्रान्ड मार्केटिङ क्षमता अनलक गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो-सबैभन्दा ठूलो खोज इन्जिन भएको कारण, गुगल-स्वामित्वको भिडियो-साझेदारी प्लेटफर्मले तपाईंलाई ब्रान्डहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्न सक्छ जुन आउने समयहरूमा फस्टाउन सक्छ। एक राम्रो परिभाषित YouTube मार्केटिङ रणनीति संग, तपाईं आफ्नो ब्रान्ड2बिलियन भन्दा बढी मान्छे को सामने प्रदर्शन गर्न र आफ्नो प्रतिस्पर्धीहरु भन्दा धेरै कदम अगाडि हुन सक्नुहुन्छ।
यद्यपि, YouTube मार्केटिङ निश्चित रूपमा केकको टुक्रा होइन, विशेष गरी यदि तपाइँ भर्खरै भिडियो मार्केटिङको नयाँ पानीमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। YouTube च्यानल सिर्जना गर्ने, चलाउने, र मुद्रीकरण गर्नु अत्यन्तै आकर्षक हुन सक्छ, तर तपाईंले YouTube मार्केटिङबाट अधिकतम फाइदा उठाउन केही स्मार्ट तरिकाहरू जान्न आवश्यक छ। यदि तपाईं अज्ञानी महसुस गर्दै हुनुहुन्छ भने, आउनुहोस् तपाईलाई यहाँ यी केही तरिकाहरू मार्फत लैजाऔं:
1. आफ्नो भिडियो सामग्री अप्टिमाइज गर्नुहोस्
युट्युब मार्केटिङबाट उत्कृष्ट फाइदा उठाउने एउटा निश्चित तरिका भनेको प्राविधिक कुराको ख्याल गर्नु हो। ध्यान खिच्ने भिडियो शीर्षकहरू सिर्जना गरेर प्लेटफर्ममा थप दृश्यताका लागि आफ्ना भिडियोहरूलाई अप्टिमाइज गर्नुहोस् — जसले मानिसहरूलाई तपाईंको सामग्रीमा क्लिक गर्न लोभ्याउँछ। भिडियो शीर्षकहरू अप्टिमाइज गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण विचार भनेको सही किवर्डहरूको प्रयोग हो — प्रयोगकर्ताहरूले खोजिरहेका शब्दहरू — तपाईंको भिडियो शीर्षक र भिडियो विवरणमा। साथै, अधिकतम ६० क्यारेक्टरका साथ छोटो शीर्षकहरू सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण छ। तपाइँको भिडियो शीर्षक र विवरण कुरकुरा र स्पष्ट हुनुपर्छ र दर्शकहरूलाई तपाइँको सामग्री हेर्नको लागि कारण दिनु पर्छ।
2. थम्बनेलहरू अनुकूलित गर्नुहोस्
भिडियो शीर्षक र भिडियो विवरण बाहेक, तपाईंको भिडियो सामग्रीको थम्बनेलले यसको क्लिक-थ्रु दर (CTR) मा ठूलो प्रभाव पार्छ। YouTube मार्केटिङ विशेषज्ञहरूले दर्शकहरूको अपेक्षाहरू सेट गर्न र स्पष्ट गर्न भिडियोहरूमा प्रभावकारी थम्बनेलहरू हुनुपर्छ भनेर बारम्बार जोड दिन्छन्। तपाइँको थम्बनेलहरूले तपाइँको दर्शकहरूको चासो जगाउनु पर्छ, तपाइँको भिडियोमा पछि के हुन्छ भनेर आश्चर्यले भरिन्छ। तपाईं आफ्नो थम्बनेलहरू अनुकूलित गर्न फोटोशप वा भिडियो सम्पादन उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईंको भिडियो थम्बनेलहरूले भावनाहरू जगाउँछन् र कथा बताउँछन्, तपाईंको भिडियो सामग्री प्रभावशाली हेराइहरू प्राप्त गर्न सम्भव छ।
3. आदर्श लम्बाइमा टाँस्नुहोस्
YouTube लाई मार्केटिङ प्लेटफर्मको रूपमा प्रयोग गर्ने अर्को टिप तपाईंको भिडियो सामग्रीको लम्बाइलाई अनुकूलन गर्नु हो। उच्च संलग्नताको खोजीमा, YouTube मार्केटिङ विशेषज्ञहरूले उनीहरूको भिडियोहरूको कुल हेराइ समयमा फोकस गर्छन्। आदर्श रूपमा, तपाईंको भिडियो सामग्रीको अवधि5मिनेट भन्दा बढी हुनु हुँदैन। तथापि, यो तपाईंले प्रकाशन गरिरहनुभएको सामग्रीको प्रकृति र प्रकारमा निर्भर गर्दछ। जब त्यहाँ कुनै कडा-र-छिटो नियम छैन, तपाईंले भिडियो लम्बाइको साथ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ एउटा बिन्दुमा पुग्न जहाँ तपाईंको च्यानलले अधिकतम संलग्नता ड्राइभ गर्छ। जे भए पनि, तपाईंले उच्च गुणस्तरका भिडियोहरू सिर्जना गर्न र तिनीहरूलाई जानकारीमूलक, छोटो र रोचक बनाउनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।
4. सामाजिक जानुहोस्
क्रस-प्लेटफर्म पदोन्नतिले तपाईंको YouTube मार्केटिङ रणनीतिलाई कडा रूपमा मद्दत गर्न सक्छ। तपाईंको YouTube च्यानलको पहुँचलाई अधिकतम बनाउन, तपाईंले प्लेटफर्महरूमा उपस्थित हुनुपर्दछ जहाँ तिनीहरू सबैभन्दा सक्रिय छन्। लक्ष्य भनेको तपाइँको भिडियो सामग्रीलाई उनीहरूको अगाडि राख्नु हो। तपाईले विभिन्न सामाजिक मिडिया नेटवर्कहरूमा लुप गरेर यो गर्न सक्नुहुन्छ - यो फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, वा LinkedIn हो। सेवी मार्केटरहरूलाई आजको मार्केटिङ संसारमा सोशल मिडिया समुदाय र समूहहरूको मूल्य थाहा छ। यी ठाउँहरू हुन् जहाँ तपाईंको YouTube च्यानलले धेरै आकर्षण प्राप्त गर्न सक्छ। यदि तपाइँ यी च्यानलहरूमा तपाइँका भिडियोहरू साझा गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ निश्चित रूपमा तपाइँको पहुँच विस्तार गर्न र तपाइँको च्यानललाई उच्च स्थानमा लैजाँदै हुनुहुन्छ।
माथि उल्लिखित बिन्दुहरू धेरै तरिकाहरू मध्ये केही मात्र हुन् जसमा तपाईं YouTube मार्केटिङको बारेमा जान सक्नुहुन्छ र प्लेटफर्मको ठूलो राजस्व-उत्पादन क्षमतालाई बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्छ। यी सुझावहरू लागू गर्दा तपाईंले रचनात्मक रूपमा सोच्नु महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने यूट्यूब मनपर्दो किन्नुहोस्, सदस्यहरू, र टिप्पणीहरू, तपाईं छनौट गर्न सक्नुहुन्छ YTpals, एक प्लेटफर्म जसले तपाइँको YouTube च्यानल बढाउन सक्छ।
YouTube लाई मार्केटिङ प्लेटफर्मको रूपमा प्रयोग गर्ने चतुर तरिकाहरू YTpals लेखकहरू द्वारा, 16 मई 2022
W तरिकाहरू तपाइँले तपाइँको YouTube दृश्य वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ
YouTube अनलाइन मार्केटिंगको लागि सबैभन्दा प्रख्यात प्लेटफर्महरू मध्ये एकको रूपमा लगातार यसको स्थिति कायम गर्दै, यो कुनै गोप्य कुरा छैन कि अनलाइन मार्केटिंगको लागि भिडियोहरू प्रयोग गर्नु व्यवसायको लागि उत्तम हो। यसको “आउट इन…
किन मार्केटरहरूले YouTube मा अनबक्सिंग भिडियोहरू बनाउने बारे विचार गर्नुपर्छ?
जब यो २०० 2005 मा सुरू गरिएको थियो, YouTube केवल एक भिडियो प्लेटफर्म थियो। तर आज, १ 15 बर्ष पछि, प्लेटफर्म शीर्ष भिडियो मार्केटिंग प्लेटफर्म हो। योसँग २ मिलियन भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरू छन्, र यो घरमा…
तपाइँको YouTube भिडियोहरूको गुणस्तर कसरी सुधार गर्ने?
आज, जब तपाईं छिटो, सजिलो-अनुसरण गर्न, र जानकारीपूर्ण ट्यूटोरियलहरू प्राप्त गर्ने बारे सोच्नुहुन्छ, पहिलो कुरा मनमा राखिने YouTube भनेको हो, होइन र? यो कारण हुन सक्छ कि २ अरब व्यक्ति भिडियो प्लेटफर्ममा लग इन गर्नुहोस् ...